के हो कार्डिएक अरेस्ट ? जसले चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीलाई लग्यो-Setoghar
के हो कार्डिएक अरेस्ट ? जसले चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीलाई लग्यो
मुम्बई । शनिबार अबेर राति भारत गहिरो निन्द्रामा रहेका बेला दुबईबाट आएको एक अपत्यारिलो र नराम्रो खबरले सबैलाई आश्चर्यमा पारिदियो । धेरै समयसम्म अधिकांश मानिसहरुले खबरमा विश्वास गरेनन् । र, खबर झुटो भएको भन्दै उक्त खबर झुटो नै रहोस् भनेर प्रार्थनासमेत गर्न थाले ।
‘आउँ हामी पिरिम गरम भयौं ठूला ठूला’ बोलको गित सार्वजनिक
तामाङ हास्य सिरियल “आबा ङाछा”दर्शक स्रोताको मन जित्न सफल।